Fifidianana : mitaky fitsipi-dalao tsy mampifanditra ny JLM | NewsMada
Fifidianana : mitaky fitsipi-dalao tsy mampifanditra ny JLM
Par Taratra sur 21/12/2017
Nitondra sosokevitra manoloana izao raharaham-pirenena izao ny eo anivon’ny Jery lavitra ho an’i Madagasikara (JLM). Anisan’ny vahaolana naroson’izy ireo ny fifidianana. “Dingana ihany izany. Zava-dehibe koa anefa ny famelàna malalaka ireo kandida rehetra afa-kirotsaka mba hitondrany ny anjara birikiny hanarenana ny firenena efa tena latsaka an-kanterena. Hapetraka koa ny fametrahana lalam-pifidianana tsy miteraka fifandirana”, hoy ny mpikambana, Rasaony Pascal, omaly. Nambarany fa miantoka ny fahadiovana sy ny fangaraharan’ny fifidianana hatao izany.
Etsy andaniny anefa, manana andraikitra koa ny vahoaka amin’ny alalan’ny fandraisana anjara mavitrika amin’ny fifidianana mba hisafidianany ny filoha heveriny ho afaka mamaha ny olana iainany amin’ny andavanandrom-piainany, araka ny nambarany. “Mba ho isan’ireo mpiray antoka sy andraikitra amin’ny fampandrosoana ny firenena koa ny vahoaka, araka ny vinan’ny JLM : “Vahoaka vanona sy manana ny ampy, Madagasikara mandroso”, hoy ihany izy.
Olana iainan’ny vahoaka andavanandro…
Ankoatra izany, nohitsiny fa taratry ny tsy fahaiza-mitantana ny anton’izao olana iainan’ny vahoaka izao. Ohatra ny fitsarana, ny fananan-tany, ny fitsaram-bahoaka, ny kolikoly… “Tsy mijery ny tombontsoam-bahoaka ireo mpitantana. Manjaka ny fitiavan-tena sy ny fangoronan-karena ho an’ireo manana andraikitra… Heverina fa mpanakorontana ireo mitsikera. Sao kosa mba ny fanjakana no mampisavorovoro eto”, hoy izy.
Midika ho tsy fahampian’ny fahavononana sy ny traikefa hitantana ny firenena izany, araka ny fanambarany ihany.